हिरासतमा १२ घन्टा बसेका केसी रातभर कसैसँग बोलेनन् | CHALKHEL.COM
Home पत्रपत्रिकाबाट हिरासतमा १२ घन्टा बसेका केसी रातभर कसैसँग बोलेनन्
अदालतमा ८ घन्टा : सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा सोमबार राति पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले मंगलबार बिहान ९ बजे नै अदालत पुर्‍याएको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । सर्वोच्चका रजिस्ट्रारको उपस्थितिमा हाजिरीमा हस्ताक्षर गरेपछि केसी एम्बुलेन्सभित्रै बसे । उनी अनशनमै रहेकाले दुई चिकित्सक पनि औषधिसहित सँगै थिए । उनीहरूले केसीको ब्लडप्रेसर जाँच गरिरहेका थिए । केसी अदालतभित्र प्रवेश गरेपछि बाहिर समर्थक र शुभचिन्तकको भिड लागेको थियो । सुरक्षाकर्मीको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो ।
हिरासतमा १२ घन्टा : त्रिवि शिक्षण अस्पतालपरिसरबाट सोमबार साँझ ८ बजे पक्राउ गरेर डा. गोविन्द केसीलाई सीधै सिंहदरबारस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तमा लगिएको थियो । नेपाल प्रहरी अस्पतालको एम्बुलेन्समा प्रहरीका चिकित्सक टोली पनि साथैमा थिए । केसीलाई वृत्तको कार्यालय भवनको माथिल्लो कोठामा राखियो, जहाँ व्यवस्थित सुत्ने खाट, ओढ्ने, ओछ्याउने व्यवस्था छ । विगतमा पक्राउ परेका सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीका प्रमुखहरूलाई पनि त्यही कोठामा राखिएको थियो ।
प्रहरी चिकित्सक टोलीका अनुसार सोमबार राति केसीको मुटुको धड्कन कम भएको थियो । प्रहरी हिरासतमा उनी आरामसँग सुते । मंगलबार बिहानै प्रहरी चिकित्सक टोलीले केसीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्‍यो । केसीको खाना पकाइदिने सहयोगी बिहानै पुगेका थिए । त्यसपछि केसीको अनशनका समर्थकद्वय डा. अभिषेक सिंह र डा. जीवन खत्रीले केसीलाई भेटे ।
Previous articleयस्तो थियो अदालतको १४ प्रश्न र गोविन्द केसीको उत्तर
Next articleश्रीमानलाई बस्न दिनुपर्ने उपप्रमुखको प्रस्तावपछि यस्तो विवाद